चीन औद्योगिक जिलेटिन कारखाना र निर्माताओं | यासिन
टेक्निकल जिलेटिन / लुकाउने ग्लु भनेको के हो?
औद्योगिक टेक्निकल जिलेटिन कोलाजेनको हाइड्रोलिसिसबाट उत्पन्न प्रोटीन हो जुन पशु लुक्छ, कोलेजेन टिशूको प्रोटीन घटक हो। यो हल्का पहेंलो ग्रेन्युल हो, राम्रो जाल दानाकार गोंद जुन पानीमा विघटन गर्न सजिलो छ। उत्पादनको लागि प्रयोग गरिएको कच्चा माल जनावरको छाला वा हड्डीबाट लिइएको हो। औद्योगिक जिलेटिन प्राय: पेन्टबलहरू, चारा, गुणस्तरको घर्षण कागज, पोलिश कपडा, कालो ग्लू, रबर प्याकिंग, हस्तकला चिपकने कार्ड, काठको फर्नीचर, डाटा प्लेट चिन्ह, छालामा प्रकाश, र d्ग र बुनाई साइज, गन्ध र प्लेटिting बनाउन प्रयोग गरिन्छ। तरल, स्टाइल जेल बनाउँदै। यसको चिपचिपापन धेरै महत्त्वपूर्ण छ, महत्वपूर्ण प्यारामिटरको रूपमा कार्य गर्दछ।
जेली शक्ति खिल -2०-२50० ब्लोम
विस्कोसिटी (.6..67% °० डिग्री सेल्सियस) mpa.s २.-5--5.
राख % ≤२.।
PH % .5..5-7.०
भारी मानसिक मिलीग्राम / किलोग्राम ≤50
औद्योगिक जिलेटिनको लागि फ्लो चार्ट
• औद्योगिक GELATIN हल्का पहेंलो, खैरो वा गाढा खैरो अन्न हो, जुन mmmm एपर्चर स्ट्यान्डर्ड चलनीलाई पार गर्न सक्छ।
• यो एक पारदर्शी, भंगुर (सुख्खा हुँदा), ​​करीव स्वादिलो ​​ठोस पदार्थ हो जुन जनावरहरूको भित्रको कोलाजेनबाट प्राप्त हुन्छ ”छाला र हड्डीहरू।
• यो एक महत्त्वपूर्ण रासायनिक कच्चा माल हो। यो सामान्यतया एक gelling एजेन्ट को रूप मा प्रयोग गरीन्छ।
• अपूर्ण तथ्या .्कका अनुसार, औद्योगिक जिलेटिनले यसको प्रदर्शनको कारण बिभिन्न अनुप्रयोगहरू, than० भन्दा बढी उद्योगहरूमा, १००० भन्दा बढी उत्पादनहरू लागू गरिन्छ।
• यो व्यापक रूपमा चिपकने, जेली ग्लू, म्याच, पेन्टबल, प्लेटि liquid तरल, पेन्टि,, स्यान्डपेपर, कस्मेटिक, काठ आसंजन, पुस्तक आसंजन, डायल र रेशम स्क्रिन एजेन्ट, आदिको रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
जिलेटिन म्याचको टाउको बनाउनको लागि रसायनको जटिल मिश्रणको लागि बिन्डरको रूपमा प्रायः विश्वव्यापी रूपमा प्रयोग गरिन्छ। जिलेटिनको सतह गतिविधि गुणहरू महत्त्वपूर्ण छन् किनकि खेलको हेडको फोम विशेषताहरूले इग्निशनमा म्याचको प्रदर्शनलाई प्रभाव पार्दछ
जिलेटिन सतह आकार र कोटिंग कागजातको लागि प्रयोग गरिन्छ। कि त एक्लै प्रयोग गरिएको छ वा अन्य चिपकने सामग्रीसँग, जिलेटिन कोटिंगले सानो सतह अपूर्णताहरू भर्दछ र यसैले सुधारिएको प्रिन्टिंग प्रजनन सुनिश्चित गर्दछ। उदाहरणहरूमा पोस्टरहरू, खेल्ने कार्डहरू, वालपेपर, र चमकदार म्यागजिन पृष्ठहरू समावेश छन्।
जिलेटिन कागजको पदार्थ र स्यान्डपेपरको घर्षण कणको बिन्डरको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। निर्माणको बखत कागज समर्थन पहिलो घन जिलेटिन समाधानको साथ लेप गरिएको हुन्छ र त्यसपछि आवश्यक कण आकारको घर्षण ग्रिटको साथ धुलो हुन्छ। घर्षण पाels्ग्राहरू, डिस्कहरू र बेल्टहरू यस्तै प्रकारले तयार छन्। ओभन सुकाउने र एक क्रस-लिinking्क उपचार प्रक्रिया पूरा।
विगत केही दशकहरूमा जिलेटिन-आधारित चिपचाप बिस्तारै बिभिन्न सिन्थेटिक्स द्वारा प्रतिस्थापित गरिएको छ। भर्खर, तथापि, जिलेटिन चिपकने प्राकृतिक बायोडिग्राडेबिलिटी महसुस भइरहेको छ। आज, जिलेटिन टेलिफोन बुक बाइन्डि and र कोरुगेटेड कार्डबोर्ड सीलिंगमा छनौटको चिपकने उपकरण हो।
२k किलो / झोला, एउटा पाली झोला भित्री, बुनेको / क्राफ्ट ब्याग बाह्य।
१) प्यालेटको साथ: १२ मेट्रिक टन / २० फिट कन्टेनर, २ met मेट्रिक टन / feet० फिट कन्टेनर
२) प्यालेट बिना:
-15-१-15 जालको लागि, १ met मेट्रिक टन / २० फिट कन्टेनर, २ met मेट्रिक टन / feet० फिट कन्टेनर
२० भन्दा बढी जाल, २० मेट्रिक टन / २० फिट कन्टेनर, २ met मेट्रिक टन / feet० फिट कन्टेनर
गोदाममा भण्डारण:% 45% -65%% भित्र, 10०-२० within भित्र तापमान अपेक्षाकृत आर्द्रतालाई राम्रोसँग नियन्त्रण गर्दछ
कन्टेनरमा लोड: एक कडाई बन्द कंटेनरमा राख्नुहोस्, एक चिसो, सुख्खा, हावा हावा क्षेत्र मा भण्डारण।